Food – Page7– Healthy Life Journal
အဆင်သင့်အစာစားပြီးတိုင်း ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေရန် ဖြေဆေးအဖြစ် စားရမည့် အစာများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) တစ်ချိန်လုံး ကျန်းမာရေးနဲ့အညီစားနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့။ လူတွေက တစ်ခါတလေအဆင်သင့်အစာကို စားမိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ စားမိတဲ့ အဆင်သင့်အစာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဆိုးကျိုးကိုလျော့ကျစေဖို့ ဖြေဆေးအနေနဲ့ စားရမယ့်အစားအသောက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဟော့ဒေါ့စားပြီးသည့်အခါ ဖြေဆေး- ဂေါ်ဖီချဉ် ဟော့ဒေါ့တွေက...
ဇင့်(သွပ်)ဓာတ် ကြွယ်ဝသည့် အစာများ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ဇင့်(သွပ်)ဓာတ်ဟာ အပင်နဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် အရေးပါတဲ့ အာဟာရတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဇင့်(သွပ်)ဓာတ်ဟာ ဆဲလ်ကြီးထွားမှု၊ ဆဲလ်ကွဲပြားမှုနဲ့ ဆဲလ်ခွဲခြားမှုမှာ အရေးပါပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို သန်စွမ်းစေကာ အမြင်အာရုံ၊ မျိုးဆက်ပွားမှု၊ ပရိုတင်းတည်ဆောက်မှုနဲ့ တခြားဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။...
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အချိုရည်တွေကို အလွန်အကျွံသောက်တာကြောင့် ဘယ်လိုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ. ဒီနေ့ခေတ်မှာ အချိုရည်တွေကလည်း မျိုးစုံရှိနေပါတယ်။ ရာသီဥတုကလည်း ပူတဲ့အတွက် အချိုရည်အေးအေးလေးတွေကို အလွယ်တကူ သောက်ကြတယ်။ ကလေးတွေကလည်း အချိုရည်တွေကို ကြိုက်ကြတယ်။ အချိုရည်တွေက...
အလုပ်လုပ်သူတို့အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်အညီ စားသောက်နည်းလမ်းညွှန်
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တာဟာ လာဘ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တာနဲ့အညီ ကျန်းမာမှ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် သင့်တင့်မျှတတဲ့ အစာအာဟာရတွေ မှီဝဲတာ၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိတာနဲ့ ရောဂါဘယတွေ ကင်းဝေးအောင် ပြုမှုနေထိုင်တာကို လိုက်နာရပါမယ်။ ရောဂါတွေကို ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါနဲ့ ကူးစက်မဟုတ်တဲ့ရောဂါဆိုပြီး...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဂျပန်လူမျိုးတွေက ဘဝသက်တမ်းအရှည်ဆုံး လူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ စံချိန်ချိုးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂျပန်လူမျိုး ၃ ရာခိုင်နှုန်းကသာ အဝလွန်နေတာကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ သွယ်လျသူအများဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်လည်း အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။ ဒါကတော့ အာဟာရကြောင့်ဖြစ်ပါသတဲ့။ ဂျပန်လူမျိုးတွေ ဘယ်လိုစားသောက်နေနိုင်ထိုင်သလဲဆိုတာ အတုယူနိုင်ဖို့...
ဗိုက်အဆီများနေသူတို့ သတိပြုရမည့် အစားအစာများ
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ဗိုက်အဆီများနေသူတွေက ဘာစားသင့်သလဲ၊ ဘာရှောင်ရမလဲဆိုတာ အမေးများပါတယ်။ အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဗိုက်အဆီများနေရင် ရှောင်ရမယ့် အစာတွေကို အဓိက အကြံပေးချင်ပါတယ်။ (၁) အကြော်မျိုးစုံ ဘယာကြော်၊ ပဲကြော်၊ ဘူးသီးကြော် စတဲ့...
အခွံချွတ်မထားသော ကောက်နှံစာများ စားခြင်း၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး
နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့ အစားအသောက်တွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကို အရေးပါလှပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားအစာဟာလူတွေအတွက် ဆေးဝါးတစ်လက်လိုပဲ အစွမ်းထက်ကြောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ လေ့လာမှုအရ အခွံချွတ်မထားတဲ့ ကောက်နှံစာတွေကို စားသုံးတာက နှလုံးရောဂါအန္တရာယ်ကို ၂၅ရာခိုင်နှုန်း၊ လေဖြတ်ခြင်း အန္တရာယ်ကို ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအန္တရာယ်ကို ၂၀-၂၇ ရာခိုင်နှုန်း၊...